ဧရာဝတီစာကြည့်တိုက်: August 2011
ချိုမြငြိမ့်ညောင်း’’ မေတ္တာကျောင်း’’ တည့်။
ကျောင်းကြီးရိပ်ခို၊’ ဆရာအို’ သို့
သည်မြေ သည်ပန်း ရင်ဝယ်တမ်းသည်
ရေးသားသူ poemflower at Wednesday, August 31, 20117comments:
သူငယ်ချင်း . .
လူ့လောကမှာ ပျော်ရွှင်စွာ အသက်ရှင်ရမှ
အလိုလိုနေရင်း မရနိုင်ပါဘူး. .
ဘာကိုမှ မပုံ အပ်နဲ့နော်
ကိုယ်ကျိုး နည်းတတ်၏. .
ရေးသားသူ poemflower at Saturday, August 27, 20113comments:
“အနော်မာမြစ်မှ ယူဇနာသုံးဆယ်ကွာတဲ့နေရာမှာ……. အရန်တောင်ငါးလုံးရှိတဲ့ ရာဇဂြိုလ်ပြည် ရှိတယ်လို့ ဗုဒ္ဓဝင်မှာ တွေ့ရပေတယ်။ဟုတ်ပေရဲ့လားပေါ်ဦးရဲ့”
“ကဲကွယ် ………..အဲ့ဒီတောင်ငါးလုံးအနက်မှာ……….ဂိဇ္ဈကုဠ်တောင်ဆိုတာပါတယ်။ ဂိဇ္ဈကုဠ်လို့ခေါ်တွင် ရလောက် အောင် အဲ့ဒီတောင်ကိုက လင်းတနှင့်တူလို့လား ။ ဒါမှမဟုတ် ………အဲ့ဒီတောင်မှာလင်းတတွေနေလို့လားဆိုတာ……..ရှင်းလင်းအောင်လျှောက်တင်စမ်းပါအုံးကွယ့်”
“မှန်လှပါဘုရား……..ပုရပိုက်ထက် အက္ခရာတင်၍ မြင်သာရှင်းလင်းအောင် တင်လျှောက်ခွင့် ပြုတော်မူပါဘုရား”
ဦးပေါ်ဦးလည်း မင်းကြီး၏ ခွင့်ပြုချက်ရရှသဖြင့် ပုရပိုက်ယူကာ ရေးသားဆက်သွင်းလေသည်။
“တောင်ငါးလုံး၏အမည်များမှာ ………ဝေဘူလတောင်၊ဝေဘာလတောင်၊ က္ကသိဂိလိတောင်၊မကုဠတောင်၊ ဂိဇ္ဈကုဠ်တောင် တို့ဖြစ်ပါတယ်ဘုရား……..၊ဂိဇ္ဈကုဠ်တောင်၏ အထွက်မှာ ငှက်ဠင်းတတို့ နေထိုင်ကျက်စား သောကြောင့်ပါဠိအလိုအားဖြင့်ဠင်းတကို ဂိဇ္ဈဟု ခေါ်သောကြောင့် ဂိဇ္ဈကုဠ်တောင်ဟု ခေါ်တွင်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း တင်လျှောက်အပ်ပါသည်ဘုရား………”
မင်းတရားကြိးက ပေါ်ဦး၏ လျှောက်တင်စာကို ဖတ်သည်။ (လင်းတ)ကို ( လကလေး)နှင့်မရေးဘဲ( ဠင်းတ) ဟု ( ဠကြီး)နှင့်ရေးထားကြောင်း သတိပြုတော်မူသည်။
“လင်းတ ကိုဘဇာ့ကြောင့် ဠင်းတ ဟု ရေးသတုံး၊ခွဲထားသတ်ပုံများရှိသလား ပေါ်ဦးရဲ့”
“သဟာ ဖြင့် ဘဇာ့ ကြောင့် ဠကြီး နှင့်ရေးထားသတုန်း”
“မှန်လှပါ……………ဘဝရှင်မင်းတရားကြီးဘုရား………ငှက်တကာတွင် အရုပ်ဆိုးသောငှက် ဖြစ်သဖြင့် အက္ခရာတို့တွင်အရုပ်ဆိုးသောအက္ခရာဖြင့်ရေးမှ သဘာဝ ယုတ္တိရှိမည်ဟုထင်မှတ်ကာ ရေးသားရခြင်းဖြစ်ကြောင်းပါဘုရား”
“ပေါ်ဦးတို့ကတော့ …………ကြံကြံဖန်ဖန် စဉ်းစားပါပေ့ကွယ်”
ဘိုးတော်မင်းတရားကြီးက ပြုံး၍ မိန့်တော်မူလေသည်။
အရုပ်ဆိုးသောငှက် ဖြစ်သဖြင့် အက္ခရာတို့တွင်အရုပ်ဆိုးသောအက္ခရာဖြင့်ရေးကြောင်း ……….
ဦး ပေါ်ဦး၏လျှောက်တင်ချက်ကို ကြားသိသူတိုင်းက ပြုံးမိသည်ချည်းဖြစ်ပါသည်။
ရေးသားသူ may16 at Friday, August 26, 20116comments:
မြေခွေးတစ်ကောင်ဟာ ပြဇာတ်ရုံရဲ့ စတိုခန်းထဲ ကြုံကြိုက်ပြီးရောက်သွားသတဲ့။
မျက်နှာပြောင်ပြောင်တစ်ခုက ကြည့်နေတာမြင်လိုက်တဲ့အခါ အလွန်ထိတ်လန့်သွားသတဲ့။
ဒါပေမဲ့ အနီးကပ်ကြည့်လိုက်တော့ မျက်နှာဖုံးစွပ်မှန်းသိသွားတယ်လေ။ ပြဇာတ်သမားတွေ မျက်နှာမှာတပ်ဆင်လေ့ရှိတာ ကိုးကွဲ့။
‘ အို မင်းကြည့်ရတာ အလွန်လှပေမယ့် အထဲမှာ ဦးနှောက်ရှိမနေတာ သနားစရာပဲ’
ရေးသားသူ may16 at Wednesday, August 24, 20114comments:
ကျွန်မတို့ကွန်ပျူတာအသုံးပြုသူများသည် မျက်စိကို အလွန်အမင်း အားစိုက် အသုံးပြု ရ၍ မျက်လုံးများ အမြဲ ညောင်းညာနေတတ်ပါသည်. . . . လူတိုင်း လူတိုင်းသည် မိမိ၏ မျက်စိနှင့်ပက်သက်သော စစ်ဆေးမှု အကုန်အစင်ကို တစ်နှစ်တစ်ကြိမ် ပြုလုပ်သင့်၍ ကွန်ပျူတာသမားများ အနေဖြင့် နှစ်စဉ် မျက်စိ စမ်းသပ်မှုသည် အရေးကြီးဆုံး မလုပ်မဖြစ် စစ်ဆေးမှု များ ပြုလုပ်ရန် လိုအပ်ပါသည် . .
ကွန်ပျူတာ အသုံးပြုလျှင် ကွန်ပျူတာ Screen နှင့် မျက်နှာကို အနည်းဆုံး 20 လက်မခန့် ခွာထားရပါမည်. . . မိနစ် ၂၀ ပြည့်ပြီးတိုင်း တစ်ခါ အနားပေးပြီး အခန်းပတ်လည် လှည့်ပတ်ကြည့်ပေးခြင်း ၊ အဝေးရှိ အရာဝတ္တု ပစ္စည်းများကို ကြည့်ပေးခြင်းများ ပြုလုပ် အသင့်ရှိပါသည်.. ပုံမှန် လေ့ကျင့်ခန်းသဘောမျိုး လေ့ကျင့်ပေးပါလျှင် မျက်စိညောင်းညာမှုကို ကာကွယ်နိုင်ပါသည်. . . . မိမိရုံးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ပစ္စည်းများ၊ စာရွက်စာတမ်းများကိုလည်း Screen နှင့် တူညီသော အကွာအဝေးမှာ ထားပေးလျှင် မျက်လုံးတွင် မကာ ဇက်၊ လည်ပင်းများ ညောင်းညာမှုများ ကို လွတ်စွာ မှ သက်သာစေနိုင်ပါသည်. . .
မိမိကွန်ပျူတာ Screen အရောင်သည် အလွန် စူးရှ တောက်ပနေပါလျှင် အလင်းရောင် လျှော့ချပေးသော အကာအရံတစ်ခု Screen ရှေ့တွင် တပ်ဆင်ထားပါ. . . ၄င်းအကာအရံသည် မှုန်ဝါးဝါး ၊ မပီမသ ဖြစ်ခြင်းများ မရှိစေရပါ. . ဖြစ်နိုင်လျှင် ပြတင်းပေါက်မှ အလင်းရောင်များ၊ မီးချောင်းရောင်များ ရောင်ပြန်ဟပ်မှုမှ ကင်းဝေးအောင် Screen ကို လိုသလို ထိန်းညှိပေးနိုင်သော စားပွဲမျိုးကို သုံးပါ. . .
မိမိထိုင်သည့် ထိုင်ခုံကိုလည်း နေရာတကျနှင့် သက်တောင့် သက်သာရှိသော၊ လိုသလိုပြင်ဆင်မှု ပြုနိုင်သော ထိုင်ခုံမျိုးကို ရွေးချယ်ပါ. . . ကွန်ပျူတာ Keyboard ကို Screen အောက် လက်မ အနည်းငယ်ခန့် နှိမ့်ထားပါ. . .
ကွန်ပျူတာမော်နီတာကိုလည်း မျက်လုံးနှင့် တစ်တန်းတည်း မထားဘဲ မျက်စိအောက် ၃၅ ဒီဂရီခန့် နှိမ့်ထားရပါသည်. . . . .သို့မှသာ မျက်ရည်ခြောက်ခြင်း ဖြစ်မှုကို တားဆီးပေးနိုင်ပါသည်. . . . ကွန်ပျူတာ အသုံးပြုသူများသည် မျက်စိကြည်လင်ဆေးရည်များ ရံဖန်ရံခါ ဆိုသလို ခတ်ပေးဖို့လိုပါသည်. .သို့မှသာ မျက်စိနီရဲခြင်း၊ ယားယံခြင်ျးား လျော့နည်းနိုင်ပါသည်. . . .
ကွန်ပျူတာ ကို တစ်နေ့တာလုံး အသုံးပြုရသူများသည် မျက်စိမကြာဏ အနားပေးခြင်း အနေဖြင့် အခန်းတွင်း ၊ အခန်းပြင် လှည့်လည်လျှောက်ခြင်း၊ ကွန်ပျူတာ အလုပ်မဟုတ်သော အခြား ကိစ္စများဆောင်ရွက်ခြင်းများကို နှစ်နာရီခြား(သို့) သုံးနာရီခြားတစ်ခါ တစ်ကြိမ်လျှင် ၁၅ မိနစ်ခန့် လုပ်ဆောင်ပေးခြင်းဖြင့် မျက်စိ ညောင်းညာခြင်းမှ ကာကွယ်နိုင်ပါသည်. .
ရေးသားသူ may16 at Saturday, August 20, 20114comments:
ဘယ်တော့မှ လုပ်လေ့မရှိဘူး. .
ကိုယ် ဖဲရိုက်တာ ပြောလိမ့်မယ်
သူလုပ်လို့ ငါလုပ်တာလို့ ပြောတတ်ကြတယ်
ရေးသားသူ poemflower at Thursday, August 18, 20115comments:
မနေ့က လမ်းမပေါ်မှာ ကားရပ်ပြိး
တစ်လမ်းလုံး ကားတွေ ပြည့်ကြပ်
ကိုယ့်ကြောင့် သူတစ်ပါး စိတ်အနှောင့်အယှက်မှာကို
အဲဒီလို ကိုယ်လုပ်ချင်တာကို လုပ်ပြီး
လူ့လောက ကြီးဟာ စိတ်ပျက်စရာကောင်းအောင်
အဲ့ဒီလူမျိုး သမီးမဖြစ်ပါစေနဲ့. .
ရေးသားသူ may16 at Friday, August 12, 20116comments:
ရေးသားသူ poemflower at Tuesday, August 09, 2011 1 comment:
‘မိမိတို့ရဲ့ အဖြေလွှာပေါ်မှာ ‘အမှား’ အဖြစ်ပြချင်ရင် ကန့်လန့်ဖြတ်ပြီး မျဉ်းတစ်ကြောင်းဆွဲပါ။’
ကျွန်တော်ရဲ့ အဖြေလွှာစာရွက် ပေါ်မှာကန့်လန့် မျဉ်းနှစ်ကြောင်းဆွဲလိုက်ပါတယ်။
‘အမှားကို အမှားလို့ပြောရင် အမှန်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အဆိုကို မှန်မမှန် စမ်းသပ်ကြည့်တာပါ။’
အဲ့ဒိနှစ်က အောင်စာရင်းမှာ ကျွန်တော်ရဲ့နာမည်ပါမလာပါဘူး။
ရေးသားသူ may16 at Saturday, August 06, 20113comments:
သားက အဲ့ဒီိပန်းတိုင်က မ လျှောက်ဘူး။
သားအပေါ်မှာ ထားခဲ့တဲ့ မျှော်လင့်ချက်တွေ
ပြောတဲ့စကားသံမှာ နောင်တရတဲ့အသံ ကင်းမဲ့နေတယ်။
ဖေဖေ ကရုဏာဒေါသောနဲ့ ပြောမိတယ်။
သားကဖေဖေ့ စကားကို ကြားပြီး
ဝမ်းနည်းတယ်၊ မခံစားနိုင်ဘူးဖြစ်တယ်………တဲ့
ရေးသားသူ may16 at Thursday, August 04, 2011 1 comment:
ဒီလိုပါပဲ။ ကျောင်းသားတစ်ယောက်ဟာ စာမကျက်ခင် ရေချိုးထားရင် စိတ် ကော ရုပ်ကော ကြည် လင် နေတဲ့ အတွက် စာကျက်လို့လည်းပိုကောင်းနေပါလိမ့်မယ်။ ကိုယ်က ဓိသဘောလေးတွေ အာရုံပြုပြီး ကိုယ်တွင်းကိုယ်ပ နှစ်ဌာနကို သန့်ရှင်းနေအောင် မကြာခဏ လုပ်ပေးနေရပါမယ်။ စိတ်ချမ်းသာနေရင် တရားအလုပ်ပဲလုပ်လုပ်၊ စီးပွားရေးပဲလုပ်လုပ်၊ စာပဲကျက်ကျက် ၊ဘာပဲလုပ်လုပ်၊အဆင်ပြေနေပါလိမ့်မယ်။
တကယ်လို့ စိတ်ညစ်လာပြီဆိုရင် ကိုယ်နေတဲ့အခန်းကို သန့်ရှင်းရေးလုပ်လိုက်ပါ။ အိပ်ရာ၊ ခြင်ထောင်၊စောင်၊ ခေါင်းအုံးတွေကို လျှော်ဖွပ်ပြီး အသစ်နဲ့လဲလိုက်ပါ။ ပြီးတော့ရေချိုးလိုက်ပါ။ရေချိုးပြီးရင် ကိုယ်နှစ်သက်တဲ့ လျှော်ဖွပ်ပြီးသား အဝတ်လေးကို ဝတ်လိုက်ပါ။
အားလုံးပြီးတာနဲ့ အသစ်လဲပြီးသားအိပ်ရာပေါ်မှာ ကိုယ်နဲ့ သပ္ပာယဖြစ်သလိုထိုင်ပြီး ခါးကို ဖြောင့်ဖြောင့်ထား၊ မျက်လုံးလေးမှိတ်၊ လက်အုပ်ကလေးချီပြီး ငါးပါးသီလကို ယူလိုက်ပါ။ တစ်ဆက်တည်းပဲ'' မြတ်စွာဘုရား၊ ဘုရားတပည့်တော် ခန္ဓာကိုယ်ထဲကို သီတင်းသုံးတော်မူပါဘုရား'' လို့ပင့်လိုက်ပါ။ ကိုယ်က အမျိုးသမီးဖြစ်နေလို့ ပင့်ရမှာအားနာနေရင် ဦးခေါင်းထက်ကိုပင့်လိုက်ပါ။
စိတ်ထဲမှာလည်း မြတ်စွာဘုရား ကိုယ့်ခန္ဓာကိုယ်ထဲ၊ကိုယ့်ဦးခေါင်းထက်မှာ ရှိနေတယ်လို့ နှလုံးသွင်းထားလိုက်ပါ။ မြတ်စွာဘုရားကတော့ ပရိနိဗ္ဗာန် စံပြီးပြီဆိုတော့ တကယ်တော့ ဘယ်ကြွလာမှာလဲ။ စိတ်ဓာတ်အင်အား ကိုယူတာပါ။ စိတ်ထဲမှာမြတ်စွာဘုရား တကယ်ကြွလာတယ်လို့ နှလုံးသွင်းထားရမှာပါ။
အားလုံးပြီးရင် လက်အုပ်ကလေးချီ ထားတာလေးချပြီး အရဟံဂုဏ်တော်ကို ငါးမိနစ်၊ မေတ္တာကို ငါးမိနစ်၊ ဝိပဿနာကို ငါးမိနစ် ပွားနေလိုက်ပါ။ ဒါဆိုရင်စိတ်ချမ်းသာလာပါလိမ့်မယ်။ မယုံရင် စမ်းကြည့်ပါ။ စာရေးသူလည်း စိတ်ညစ်လာရင် ဒီနည်းအတိုင်းပဲ လုပ်တာပါ။ ဒါဆို စိတ်ညစ်တာပျောက်သွားတာများပါတယ်။ ကိလေသာမကင်းသရွေ့တော့ စီတ်တွေက အခါအားလျှော်စွာ ညစ်နေရအုံးမှာပါ။
စိတ်ညစ်တာကိုစိတ်ညစ်တဲ့အတိုင်းမထားဘဲ ကိုယ်နှစ်သက်တဲ့နည်း တစ်ခုခုနဲ့ ပယ်ပစ်လိုက် နိုင်ဖို့ပါ။ ရေချိုးလိုက် တာကတော့ သိပ်ပြီးမခက်လှပါဘူး။ဒီနည်းကလေးကို အထုံအကျင့်လေးတစ်ခုလုပ်ထားလိုက်ဖို့ပါ။ စိတ်ညစ် လာတာနဲ့ ရေချိုးလိုက်၊ဂုဏ်တော် မေတ္တာလေးပွားလိုက်၊ စိတ်ညစ်လာတာနဲ့ ရေချိုးလိုက်၊ ဂုဏ်တော် မေတ္တာ လေး ပွားလိုက်နဲ့ ကျင့်ပါများသွားရင် အထုံဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်။အထုံဖြစ်သွားရင် စွဲသွားတာ များပါတယ်။ ကောင်းတဲ့ အထုံလေးတွေဆို စွဲနေအောင် လုပ်ထားရပါမယ်။
အဲ့ဒီလိုမှ မဟုတ်ဘဲ စိတ်ညစ်လာရင် ထွက်ပေါက်အနေနဲ့ အကုသိုလ်မကင်းတဲ့ တခြားတစ်ခုခုကို သွားလုပ်မယ် ဆိုရင်တော့ ကိုယ်ပြုတဲ့ အပြုအမူက စွဲသွားတတ်ပါတယ်။မကောင်းတာ စွဲသွားရင် ဖြတ်ရတာခက်ပါတယ်။ စိတ်ညစ်တာကို အကြောင်းပြုပြီး အကုသိုလ်မကင်းတဲ့ အပြုအမူတွေ စွဲသွားတဲ့လူတွေ အများကြီးပါ။ တွေ့ဖူးမြင်ဖူးကြမှာပါ။
တချို့ကျတော့ စိတ်ညစ်လာရင် တစ်ယောက်ယောက်ဆီကို ဖုန်းဆက်ပြောလေ့ရှိပါတယ်။ ကိုယ်ဖုန်းဆက် ပြောတဲ့လူက ကောင်းမြတ်တဲ့အကြံပေးရင်တော်ပါရဲ့ ၊ဘယ်လိုကဲလိုက်ပါလား၊ ၊ဘယ်လိုလုပ်လိုက်ပါလား၊ စသည်ဖြင့် အကုသိုလ်မကင်းတဲ့အကြံပေးလိုက်ရင် ကိုယ့်အတွက် အများကြီးနစ်နာ သွားနိုင်ပါတယ်။
ကဲ ထားပါတော့ တစ်ယောက်ယောက်ဆီကိုဖုန်းဆက် အကြံ ဥာဏ်တောင်းလို့ ကိုယ်အကြံ ဥာဏ်တောင်း တဲ့ သူက လာခဲ့၊ ဘယ်ဆိုင်မှာ၊ ဘယ်ကလပ်မှာ သွားကဲရအောင်၊ လုံးဝလန်းစေရမယ် ဆိုပြီး လှမ်းခေါ်ပါပြီတဲ့ ၊ ခေါ်တဲ့အတိုင်း နေရာတစ်ခုခုမှာ ကဲနေပါပြီတဲ့၊ ကဲနေတုန်းမှာ လန်းတယ်လို့ထင်ရပေမယ့် ကဲပြီးတော့လည်း ညစ်လက်စစိတ်က ပြန်ညစ်ရအုံးမှာပါ။
နောက်ဆုံး ကိုယ့်မှာအကုသိုလ် အပို ဖြစ်ရတာပဲအဖက်တင်တာပါ။ အဓိက ကတော့ ဘယ်လိုအာရုံပဲ ကြုံလာ ကြုံလာ၊ ကြုံလာတဲ့ အာရုံကို အကြောင်းပြုပြီး အကုသိုလ်ဖြစ်သွားဖို့ပါ။ ဒါကိုကိုယ်က အလေ့အကျင့်ဖြစ်အောင် လေ့ကျင့် ၊လေ့ကျင့် ထားဖို့ပါ။ လေ့ကျင့်ထားရင် စွဲသွားတတ်ပါတယ်။ နောင်ဆိုရင် အထူး ကြောင့်ကြစရာ မလိုတော့ပါဘူး။
ဘာပဲပြောပြော စိတ်ညစ်ရင်ရေချိုးလိုက်ပါ။ဒါဆိုရင်စိတ်ချမ်းသာလာပါ လိမ့်မယ်။
ရေးသားသူ poemflower at Tuesday, August 02, 20112comments: